I-Iconic Mokotahi Bach itholakala maqondana ne-Mahia Beach Boat Ramp kanye ne-Fishing Club.
Indawo yokuhlala, ikhishi kanye negumbi lokugezela litholakala ku-Bach yasekuqaleni. Amakamelo okulala amane esimanje avulekele kuthango oluyimfihlo ngokuphelele egcekeni elikhulu elingemuva. Lesi sigaba sinikeza indawo yokupaka izimoto eziningi kanye nesikebhe.
I-Mahia ithembele emanzini emvula ngakho-ke sicela wonge amanzi. Ishawa nezindlu zangasese zangaphandle ziphakelwa ngamanzi abhorekile aphuzwayo kodwa kwesinye isikhathi angaba nephunga.
Ikhaya lilala abantu abayi-10 kumagumbi okulala ama-4. Kuhlinzekwa imicamelo namaduvethi. Ngicela ulethe ilineni lakho; amashidi, imicamelo, amathawula, amathawula etiye. Ukuqashwa kwelineni kuyatholakala ngesicelo ngo-$15 umuntu ngamunye. Sicela uqinisekise le sevisi phakathi nenqubo yokubhuka.
Isevisi Yokuhlanza Lapho Usuka iyimfuneko futhi ibiza u-$120 ohlanganisa ukususwa kokugaya kabusha (amabhodlela, amathini, ipulasitiki). Sicela uqinisekise ukuthi ushiya indawo icocekile, izitsha seziqediwe futhi i-BBQ ishiywe ihlanzekile.
Izivakashi kudingeka zisuse udoti ovamile endaweni noma zibeke udoti ezikhwameni zikadoti ezigunyazwe umkhandlu ezingathengwa esitolo sendawo.
Sicela wonge amanzi njengoba amakhaya aseMahia Beach ethembele emanzini emvula. Izindawo zokugeza izikebhe zitholakala endaweni yesikebhe.
I-Mahia Peninsula iyi-Surfing Mecca futhi ihlanganisa amanye amagagasi ahamba phambili nezindawo zokuntweza ezweni. I-Mahia inedumela elihle kakhulu lokuletha ukuntweza okuthembekile, okungaguquki kanye nekhwalithi ephezulu cishe kunoma yisiphi isimo sezulu. Ukuma nezici zendawo yeNhlonhlo ye-Mahia kusho ukuthi kunokwehlukahlukana okukhulu ezinhlotsheni zekhefu nezindawo ezikhukhumele - lapho ulwandle, iphoyinti kanye nezindawo zamatshe aphuka zicosha ukukhukhumala enyakatho, empumalanga naseningizimu.